IDisney Plus Bundle (2020) - Thola iDisney +, iHulu ne-ESPN + - Ezokuzijabulisa
Uhambo lwe-nostalgic lwamakhathuni wakho wobuntwana nama-movie, imibukiso ye-TV yaphesheya neyangempela, ama-movie weHollywood, nezemidlalo. IDisney Plus + Bundle ikulethela iHulu ne-ESPN + ngaphakathi kwephakeji layo ukuze ube yindawo yakho eyodwa yokuzijabulisa okuphelele!
Kuzwakala kujabulisa! Ungazibamba kanjani izinzuzo zakho? Iyini inqubo? Ngabe udinga ukuzithola ngokwehlukana? Yonke imibuzo yakho izophendulwa lapha.
Ngaphezu kwalokho, sizokulethela ukuhlaziywa okusheshayo nokubuyekezwa kwephakeji. Izokusiza ukuthi unqume ukuthi ngabe ukukhetha okulungile yini kuwe noma cha. Ngakho-ke, ake siqale ngokubuza imibuzo efanele!
Yini i-Disney + Bundle?
Njalo isevisi yokusakaza umhlinzeki usempini engapheli yokukulethela okunezinhlobonhlobo ezihamba phambili zokuqukethwe koqobo nokudumile. Ngamunye usebenza kanzima ukuthola ilayisense yezinsizakalo zokusakaza ezihamba phambili. Kodwa-ke, konke lokhu kuvame ukuholela ekutheni bakhokhise ngokweqile.
IDisney ibambisene neHulu ne-ESPN ukukulethela iqoqo elingenakunqotshwa lokuqukethwe. Bobathathu laba bahlinzeki bezinsizakalo bangamaphayona emikhakheni yabo. Ngakho-ke, ungaqiniseka ngokuqukethwe okufanele ukuzalisa kwakho. Ake sibheke lokho okukodwa kwalokhu okunikezwayo:
1. IDisney +
IDisney Plus ikulethela ukufinyelela okuphelele kuyo yonke imininingwane yayo imibukiso nama-movie . Unayo yonke imitapo yolwazi yeDisney etholakala njengokuqukethwe 'okufunekayo'. Ngaphezu kwalokho, uthola ukufinyelela kuMarvel Cinematic Universe, ukukhiqizwa kwesitudiyo sikaPstrong, i-National Geographic, ne-Start Wars iqoqo eliphelele.
Ngakho-ke, ungaqiniseka ngokuzijabulisa okungapheli ezandleni zakho.
2. IHulu Basic
Lapha uneqoqo le- imibukiso ye-TV yangempela nama-movie ngezinketho ezithandwa kakhulu neziphoqayo. Ake sikubeke ngale ndlela. UHulu ungumhlinzeki wensiza osakazayo e-USA. Ngakho-ke, ungathola cishe yonke imibukiso ethandwayo ne-movie ngokufunwa ngayo.
Kodwa-ke, njengoba kuwuhlelo oluyisisekelo, kufanele ubhekane nezikhangiso. Kunendlela ongathola ngayo inguqulo engenazikhangiso yeHulu noma i-Hulu + Live TV ichazwe ngezansi. Sekukonke, i-Hulu ukukhetha kwakho kokuma okukodwa kwezinhlelo zangempela ze-TV nokunye okuqukethwe.
3. I-ESPN +
Ekugcineni, une-ESPN +. Yisevisi yokusakaza ezemidlalo ephezulu. I-ESPN ikulethela i- ukuqoqwa kwemidlalo ebukhoma nokuqukethwe koqobo okufana nezingxoxo, amadokhumentari, nokunye okuningi.
Ngamazwi alula, kufanele ube nakho kunoma yimuphi umthandi wezemidlalo. Ungathola ukufinyelela okunezinhlobonhlobo zemicimbi eminingi ebukhoma. Konke kutholakala ngokuchofoza okulula.
Ngabe Idili Lifanele Ukutholwa?
Ake sikubeke ngale ndlela. Uma ungabhalisanga kunoma imuphi omunye umhlinzeki wesevisi yokusakaza, le phakheji ngokuqinisekile izokusindisa izinzuzo ezimbalwa. Ngokuhamba kwesikhathi, kuyisilinganiso sesaphulelo esihle. Uthola ezemidlalo, ama-movie, imibukiso ye-TV, neDisney.
Ngokufanayo, uma ungabhalisela ngayinye yalezi zinsizakalo ngawodwana, izindleko zizonke zingaba ngaphezulu kunenqwaba. Ngakho-ke, ngokungangabazeki isipho esingcono.
Njengoba lawa maphakheji njengamanje atholakala e-USA, kufanelekile ukubheka kuwo. Njenge pro-tip, unga zama iphakethe lenyanga eyodwa ukubona ukuthi unesikhathi sokufinyelela uhla oluphelele lokuqukethwe. Uma kungenjalo, lapho-ke ungakhetha ukuphuma futhi uzikhiphe ohlwini.
Kodwa-ke, uma uyiqhathanisa ne- ikhebula noma i-satellite TV , uzobona ukuthi kufanelekile ukukuthola. Ngemuva kwakho konke, uthola ihabhu eliphelele lokuhlangabezana nezidingo zakho zokuzijabulisa. Leli phakheji lifanelana cishe nawo wonke umuntu, kungakhathalekile ukuthi uneminyaka emingaki futhi uthanda ini.
Ungabhalisela Kanjani ku-Disney + Bundle?
Inqubo iqondile. Landa uhlelo lokusebenza lweDisney + noma vakashela iwebhusayithi esemthethweni yeDisney plus. Ukusuka lapho ungangena ngemvume, noma kungakucela ukuthi ubhalise.Kunoma ikuphi, inketho iyatholakala ekhoneni eliphezulu kwesokudla. Landela inqubo ejwayelekile yokubhaliselwe.
Ngenkathi ukhetha iphakheji, izokukhombisa inketho yenqwaba. Khumbula, itholakala e-USA kuphela, hhayi e-UK noma kwesinye isifunda. Uma ufuna ukuyijabulela kusuka kwezinye izindawo, thola i- I-VPN ukuyifinyelela ngeseva yase-USA .Landela ngenqubo yokubhalisa, futhi njengoba wenza inkokhelo, uzoba nokubhaliselwe.
Ungayenza kanjani i-Disney + isebenze kuhlelo lokusebenza ngalunye?
Zimbili izindlela zokwenza. Ungasebenzisa izifakazelo obuzisebenzisile ekuqaleni ekubhaliseni bese ungena kwezinye izinhlelo zokusebenza. Uma lokho kungasebenzi, uzoba ne-imeyili yokwenza kusebenze i-Hulu ne-ESPN + ngawodwana, ungavakashela isixhumanisi, futhi inqubo kulula ukuyilandela.
Uma usadidekile, ungavula uhlelo lwakho lokusebenza lwe-Disney + bese uya kokubhaliselwe kwe-akhawunti yakho.
Lapho uzothola inketho yokuphatha okubhaliselwe.
Chofoza kuso, bese uzobona iHulu ne-ESPN +.
Kufanele kube nenkinobho yokwenza kusebenze eduze kwabo.
Chofoza kulezi zinkinobho ukuze uzisebenzise.
Ungayithola Kanjani iHulu + TV Ebukhoma NgeDisney +?
Ngaphambi kokuthi uqale, khumbula ukuthi ngeke usathola isephulelo esingeziwe se-Hulu + Live TV. Inani lizohlala yilokho okutholayo ngeHulu Basic.
Ngemuva kokwenza kusebenze okubhaliselwe kwakho kwe-Hulu, vula uhlelo lokusebenza
Iya kokubhaliselwe, futhi ukusuka lapho, ungashintsha iphakheji
Qinisekisa ushintsho, futhi luzosebenza ngokushesha
Uzokhokhiswa imali ethe xaxa, ngakho-ke kufanele unikeze ngemininingwane yokukhokha
Kungazwakala kuyinkimbinkimbi, kepha kuqondile. Uzuza kanjani kulokhu? Yebo, iDisney izofaka inani eliqondile lokubhaliselwe kweHulu Basic inyanga ngayinye. Leyo mali izoba ku-akhawunti yakho ye-Hulu futhi izosetshenziswa njengoba ubhalisela iHulu + Live TV.
Ngakho-ke, kungcono ukushintsha uhlelo lwakho lwe-Hulu usuku noma izinsuku ezimbili ngemuva kokuthola inqwaba njenge-pro-tip.
Ngabe Ungakuthola Okuthile Ku-ESPN +?
I-ESPN + yiphakeji enhle kakhulu enikezwa yi-ESPN, futhi uma ushintsha uhlelo lube okuthile okushibhile, ngeke ukhokhelwe ngokubuyiselwa. Futhi ngeke usithole isephulelo. Ngakho-ke, asikho isizathu sokuthi uzame leli qhinga ngokubhaliselwe kwe-ESPN + ku-combo.
IDisney + Bundle ikulethela okuhle kunayo yonke imihlaba emithathu ngesaphulelo. Ngokuqinisekile kuwufanele wonke amasenti owodwa njengoba amadili ngamanye alezi zinhlelo zokusebenza angajabulisi kangako. Kodwa-ke, kuhle ngaso sonke isikhathi ukuhlala usesikhathini maqondana nezindaba zabo bese uzama ukubhalisa nyangazonke ngezikhathi ezithile.
Amathrendi angu-8 aphezulu Obuchwepheshe ango-2022
U-Stanley Tucci uyeza nochungechunge lwe-Search for Italy